Valanaretina :: Olona dimy noahiana ho matin’ny pesta • AoRaha
Valanaretina Olona dimy noahiana ho matin’ny pesta
Nahitana trangana pesta vaovao indray tany amin’ny distrikan’Ambalavao, faritra Matsiatra Ambony, izay nahafatesana olona efatra samy mpikambana amin’ny fianakaviana iray, taorian’ny tany amin’ny kaominina Miandrandra. Olona iray hafa kosa ahiahiana ho matin’ny pesta tao amin’ny fokontany Bongavato, kaominina Mahatsinjo Atsinanana, distrikan’Arivonimamo, araka ny fampitambaovao avy amin’ny mpitsabo iray ao amin’ny CSB Bongavato, tamin’ny herinandro lasa teo. Nidina avy hatrany any an-toerana avokoa ireo tompon’andraikitra ara-pahasalamana avy amin’ny distrikan’Arivonimamo, toy ny Médecin Inpecteur sy ny Institut Pasteur de Madagascar, mijery manokana ny mikasika ny zava-misy sy manamarina ny fisian’ny trangana pesta.
“Ao anatin’ny vanim-potoana hisian’ny pesta isika ka nahitana tranga hafa tany amin’ny distrikan’Ambalavao, izay naharaisana trangana fahafatesana efatra. Voamarina ho matin’ny pesta aretin-tratra ny iray tamin’izy ireo. Avy amin’ ny fianakaviana iray ireto niharam-boina”, hoy ny fanamarinan’ny Dr Randriantsarafara Fidiniaina Mamy, tale jeneralin’ny Fisorohana arapahasalamana, ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamambahoaka.
Ho an’ny Kaominina Miandrandra dia tsy nisy tranga vaovao intsony, ankoatra ny olona iraika amby roapolo tamin’ireo narary izay efa sitrana ary iray sisa manaraka fitsaboana.
Manamafy ireo fepetra noraisina ny Fanjakana ankehitriny amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Fahasalamambahoaka ho fisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina pesta. Antoka iray hahafahana misoroka izany ny fanatonana ireo tobim-pahasalamana raha misy tranga mampiahiahy, toy ny aretin’andoha, hafanan’ny hoditra, fisian’ny fivontosana any amin’ny elakela-pe na ambany helika. Misy ny fanafody hitsaboana ny aretina sady maimaim-poana ary mandaitra satria tena mahasitrana soa aman-tsara, araka ny fanamafisan’ny Dr Randriantsarafara Fidiniaina Mamy.
Isan’ny aretina mamono olona ao anatin’ny fotoana fohy ny pesta ary mamindra haingana ihany koa. Raha sanatria ka tsy voatsabo arapotoana ny marary dia haingana be ny fihombony.